» को बन्ला डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको विजेता ?
को बन्ला डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको विजेता ?
३ पुष २०७७, शुक्रबार १३:४५
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ३ पुस । विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको फाईनल शनिबार हुँदैछ । शनिबारको फाईनल राउण्डमा शोका फाईनल जोडीहरु सुमी मोक्तान र बिजु पार्की, बुद्ध लामा र केबिका खत्री तथा प्रियना आचार्य र शुभम भुजेलको जोडीले कडा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । फाईनल राउण्डमा दर्शक भोटका आधारमा मात्र विजेता छानिने भएकोले फाईनल शो निक्कै रोमाञ्चक हुने पनि अनुमान गरिएको छ । फाईनलमा फाईनालिष्ट जोडीहरु मात्र नभई शोमा यसअघिको राउण्डसम्म प्रस्तुति दिएका प्रतियोगीहरुले पनि प्रस्तुति दिनेछन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
फाईनल जोडीहरुमध्येको एक बुद्धिका जोडी यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । बुद्ध र केबिकालाई धेरै दर्शक श्रोताहरुले विजेता बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना भएको जोडीका रुपमा हेरिरहेका छन् । चर्चित गायक समेत रहेका बुद्ध लामा र चर्चामा रहेकी कोरियोग्राफर केबिका खत्रीलाई माया गर्नेहरुले हरेक भिडियोहरुमा उनीहरुको नामै लिएर विजेता हुने दाबी समेत गर्दै आएका छन् । यसअघि नेपाल आईडल जस्तो पहिलो विदेशी फ्रेन्चाईजको विजेता बनिसकेका बुद्ध र केबिकालाई दर्शकहरुको ठूलो साथ छ । प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा बुद्ध र केबिकाको जोडी चर्चामा छ । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडी शोमा मात्र नभई शोबाहिर पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । उनीहरुको जोडीलाई दर्शकहरुले केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा मन पराएका छन् । बुद्ध र केबिकाले यो शोमा जितेमा बुद्ध विदेशी फ्रेन्चाईजको पहिलो सिजन धेरै पटक जित्ने एकमात्र स्टार हुनेछन् भने केबिका विदेशी फ्रेन्चाईजको पहिलो सिजन जित्ने पहिलो महिला कोरियोग्राफर हुनेछिन् । बुद्ध र केबिकाले फाईनलसम्म आईपुग्दा जम्मा ४३९ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले नवौँ हप्ताको पहिलो दिन र एघारौँ हप्ताको पहिलो दिन गरी जम्मा २ पटक पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका छन् । उनीहरुले ५ पटक बटम लाईनको सामना गरेर पनि फाईनलमा पाईला टेक्न सफल भएका छन् ।
फाईनलमा पुगेका जोडीहरुमध्ये विभिन्न रेकर्डहरु सहित नायिका सुमी मोक्तान र बिजु पार्की बलियो जोडीका रुपमा देखिएका छन् । उनीहरुले फाईनलसम्म आईपुग्दा जम्मा २ पटक मात्र बटम लाईनको सामना गरेका छन् तर सुमी र बिजुको सुबिजु जोडीले जत्तिकै केबल २ पटक मात्र बटम लाईनको सामना गरेर कलाकार प्रियना आचार्य र शुभम भुजेलको जोडी पनि उनीहरुको चुनौतिका रुपमा देखिएका छन् । सुबिजु जोडीले शोमा गरेका एरियल डान्स तथा स्टन्टहरुले पनि उनीहरुलाई बलियो जोडीका रुपमा चिनाएको छ । उनीहरु शोमा सबैभन्दा बढी पटक स्टन्टहरु गर्ने जोडीका रुपमा चिनिएका छन् भने निर्णायकहरुबाट पनि सर्वाधिक अंक पाएका छन् । यो जोडीले शोमा सबैभन्दा बढी अर्थात ५ पटक पूर्णाङ्क ३० मा ३० नै अंक पाएका छन् । यतिधेरै सर्वाधिक अंक शोमा अरु कुनै पनि जोडीले पाएको छैन् । त्यस्तै शोमा अहिलेसम्मको अंक जोड्दा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने जोडीमा पनि सुबिजुकै रेकर्ड छ । उनीहरुले फाईनलसम्म आउँदा जम्मा ४४६ अंक प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले अंकका आधारमा उनीहरु पहिलो नम्बरमा छन् । हालसम्म प्राप्त अंकको आधारमा बुद्धिका जोडी दोस्रो नम्बरमा र प्रियम जोडी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ । उनीहरुले दोस्रो हप्ता पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र बाह्रौँ हप्तामा पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए ।
चर्चित हाँस्य टेलिसिरियल भद्रगोलबाट चर्चित बनेकी मुन्नी अर्थात कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडी पनि फाईनलमा भिड्दैछन् । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा एकमात्र वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री जोडीका रुपमा उनीहरु स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित छन् । फाईनलसम्म आईपुग्दा फोकस जोडीका नामले पनि यो जोडी चर्चित बनेका छन् । विभिन्न म्युजिक भिडियोहरुमा पनि अभिनय गरेकी प्रियनाले लिटिल क्वीन २००८ मा फर्स्ट रनर अप हुनुका साथै मिस टिन टुरिजम २०१८ मा विजेता पनि भएकी थिईन् । उनी मिस टिन २०१८ मा उत्कृष्ट ५ भित्र परेकी थिईन् । शुभम र प्रियनाको फ्यान फलोईङ धेरै भएकोले पनि यो जोडीले शोमा बलियो पकड पनि बनाउँदै आएका छन् । फाईनलसम्म आईपुग्दा डान्समा पनि तहल्का पिटेकाले यो जोडीले शो जित्नसक्ने सम्भावना बढेको अनुमान लाउन सकिन्छ । उनीहरुले फाईनलसम्म आईपुग्दा जम्मा ३०५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।